विचित्रको खबर – Articles Nepal
Articles Nepal September 30, 2020 0
१४ असोज काठमाडौं– कैलाश पर्वतका नाम जोकोहीले सुनेकै हुनुपर्छ । शिव पुराण, मत्स्य पुरणा, स्कन्द पुराण अथाव भगवान शिवको महिमा वाचन गर्दा ‘कैलाश पर्वतको’ नाम र महिमाको जताततै चर्चा हुन्छ । देवताका पनि देवता आरध्यदेव महादेव र माता पार्वतीको वासस्थान रहेको पवित्र
अचम्मको शर्त: विवाहको लागि बेहुलाले व्हेलको दाँत फुकालेर ल्याउनुपर्ने
Articles Nepal December 30, 2019 0
विवाहको परम्परा विभिन्न स्थानमा फरकफरक हुने गर्छ । कुनै ठाउँमा भएको परम्पराले दुनियाँ सबैलाई दि’क्क बनाउने गर्छ । यो अचम्मको परम्परा फिजी भन्ने देशको हो । परम्पराको नाम त’बुआ हो । यो परम्पराले यो देशको खुब चर्चा भएको छ । विवाह गर्नु
वैज्ञानिकको चमत्कारः म’रेको मान्छेलाई जि’उँदो बनाउन सकिने
Articles Nepal December 29, 2019 0
एजेन्सी । ज’न्मिएपछि सबैको मृ’त्यु अवस्य नै हुन्छ । किनभने जन्म र मृ’त्यु हाम्रो अ’धिनमा हुँदैन । तर ब्रिटेनका एक वैज्ञानिकले म’रेका मान्छेलाई बँ’चाउन सक्ने च्या’लेन्ज गरेका छन् । ब्रिटेनका वैज्ञानिक उनले हेड ट्रान्सप्लान्टबाट म’रेको मानिसलाई जि’उँदो बनाउन सकिने ठो’कुवा गरेका हुन्
अध्ययनले भन्छ: मान्छेले दिनमा एक घण्टा अरुको कुरा काट्छ
Articles Nepal December 28, 2019 0
एजेन्सी – चाहे जस्तोसुकै मानिस किन नहोस् दिनमा एक पटक भएपनि आफ्ना अगाडि नभएको मान्छेको कुरा काटेकै हुन्छ । यो मानिसको प्रवृत्ति नै हो । कसैको कुरा काट्ने बानी हुन्छ भने कतिले प्रशंसा र राम्रो नियतले पनि कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा
अचम्म ! पादेर लामखुट्टे मा’र्नेले पाए पाद्ने जागिर
एजेन्सी :एक व्यक्तिको विषाक्तका पादका कारण लामखुट्टै म’रेका छन् । यो सत्य घ’टना हो । ती व्यक्तिको पादको विषाक्तका कारण लामखुट्टे मरेपछि वैज्ञानिकहरुले पादमा पाइएको रसायनबारे अनुसन्धान सुरु गरेका छन् ।ती व्यक्तिले पादेपछि त्यसको असर ६ मिटरसम्म फैलिने गरेको छ । पादको
यि हुन् श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सु’त्रहरू: हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने
Articles Nepal September 14, 2019 0
आजकल नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डि’भोर्सको घ’टना दिन प्रतिदिन ब’ढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न न’सकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा ख’टपट त परेको छैन ? सामाजिक संजालमा चितपरिचित लेखक गणेश ज्ञवालीले तयार पारेका श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सु’त्रहरू यी सु’त्रहरु
१२ वर्षको प्रयासपछि विश्वमै पहिलाेपटक उड्ने कार
Articles Nepal July 12, 2019 0
काठमाडौं : बैज्ञानिकहरुले विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार पारेका छन् । करिब १२ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार पारिएको हो । कार निर्माता कम्पनिले अमेरिकाबाट अर्को महिनादेखि यसको अग्रिम–बुकिङ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । ग्राहकले भने अर्को
विश्वकै धनी बिल गेट्स सरल जिन्दगी जिउछन्
Articles Nepal July 11, 2019 0
एजेन्सी : विश्वकै धनी व्यक्तिको नामले चिनिने माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक विल गेट्स हुन् । पछि एक अध्ययन प्रतिवेदनले बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिण्डा गेट्स दुवै विश्वकै सबै भन्दा धनी जोडी बनेको देखाएको थियो । सन् १९७५ मा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी
२ तलामाथि बाट खसेको नानीलाई एक युबकले च्याप्पै समातेर बचाए – भिडियो
Articles Nepal June 28, 2019 0
एजेन्सी । एक जना ब्यक्ति बाटोमा त्यसै टहलीरहेका थिए । उनको दिमागले के सोच्यो कुन्नी सडकमा उभिएर सडक किनारमा ठडिएका अग्ला अग्ला घर हेर्न थाले । त्यही बेलामा एउटी दुई बर्षकी बालिका दुई तलाको वरण्डामा जोखिम अवस्थामा थिइन् । ति युवालाई लाग्यो
अदालतले आज गरेको दुई फैशला: सन्जेललाइ आफ्नै कार्यालय र चौधरीलाई जन्मकैद
Articles Nepal March 6, 2019 0
सर्बोच्च अदालतले आज दुई महान निर्णय गरेको छ। सरकारको सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपाल सरकारका उप–सचिव प्रेमप्रसाद सञ्‍जेल पुनः श्रम कार्यालय विराटनगरमा हाजिर भएका छन् । तेस्तै, टिकापुरमा प्रहरी र जनता मार्ने नाइके सभासद